Nagu saabsan - Wuxi Lanling Railway Qalabka Co., Ltd.
Wuxi Lanling Railway Qalabka Co., Ltd. waxaa la aasaasay bishii Luulyo, 1989, waxayna ku takhasustay soo saarista qalabka tareenka. Waxyaabahayagu waxay leeyihiin qaybo kala duwan, oo ay ku jiraan noocyo guga nooca A, nooca B, nooca I, nooca II, nooca III, nooca D1, nooca WJ-2 guga guga tareenka dhulka hoostiisa mara, nooca guga ee guga loo dhoofiyo E, nooca taxanaha PR, taxanaha SKL, iyo IWM Waxaan sidoo kale soo saarnaa noocyo kala duwan oo taarikada baarkinka ah, musmaarrada tareenka, fur, faashashka gogosha, maydhashada guga, suufka birta, suufka caagga ah ee loo adeegsado noocyada kala duwan ee tareennada jiifka ah ee tareenka iyo naqshadaha dadka ka soo baxa, taarikada caagga ah, iyo waxyaabaha naylonka laga sameeyo. Cinwaanka Lanling waa No. 168 First Nanfeng Wadada, Magaalada Meicun, Degmada Xinwu, Magaalada Wuxi, Gobolka Jiangsu, Shiinaha. Gadiidka loo qaadayo ama laga keenayo Lanling waa mid aad u haboon. Gegada diyaaradaha caalamiga ah ee Wuxi waxay 10 mayl u jirtaa koonfurta magaalada Lanling, Huning express way iyo 312-state state labaduba daqiiqado ayey u jiraan.
Awoodda wax soosaarka ee sanadlaha ah ee qalabka tareenka waa qiyaastii 10 milyan oo unug. Laydhku wuxuu leeyahay 3 xariiq oo wax soo saar ah oo loogu talagalay goos gooska tareenka, 2 khadadka wax soo saarka oo si otomaatig ah u shaqeynaya, 2 khadadka waxsoosaarka waxsoosaarka birta, 1 khadadka waxsoosaarka ciddiyaha tareenka ugu horumarsan, iyo 2 khadadka isku imaatinka isku xidhka ah ee loogu talagalay daaweynta guluubka-daaweynta iyo rinjiga. Qalabka ugu muhiimsan ee Lanling waxaa ka mid ah 3 nooc oo qasriinno ah oo loogu talagalay soo saarista suufyo caag ah, 3 nooc oo mashiinno qas ah, 3 nooc oo 400-tan ah, 5 nooc oo 300-ton ah, 10 nooc oo ah 100-tan oo mashiinno faashad ah oo fidsan, iyo 1 nooc oo taariko caag ah khadka wax soo saarka.
Siyaasadda tayada Lanling waa "Adkaynta feejignaanta tayada si joogto ah; Fulinta qeexida nidaamka si adag; Horumarinta tayada hubinta tayada; Buuxinta shuruudaha heerka wax soo saarka". Bartilmaameedka tayada ee Lanling ayaa ah "In la hubiyo in heerka qiimaynta alaabtu ay noqonayso 100% marka laga tagayo warshadda, isla markaana alaabooyinka aan aqoonta u lahayn loo oggolaan karin inay baxaan". Ballanqaadka tayada ballanqaadku waa "Alaab tayo leh oo bixisa adeegyo tixgelin leh". Tayada badeecadu waa baacsigayaga weligiis ah; qanacsanaanta macaamiisha ayaa ah dadaalkeena joogtada ah, waxaana naga go'an inaan ku darsano dhismaha tareenka iyo tareenka tareenka magaalooyinka wax soo saar tayo sare leh leh, qiimo mudnaan leh, iyo adeegyo aad u fiican. Wuxi Lanling Railway Qalabka Co., Ltd. waxay si diiran u soo dhaweyneysaa macaamiisha gudaha iyo shisheeyaha inay soo booqdaan oo ay na siiyaan hagitaan xirfad leh!
Clip Lock Clip, nidaamka isku xidhka tareenka, clip clip laastik ah, e2055, dhejiska tareenka, tareenka,